အကြောင်းအရာပေးပို့မော်ကွန်းတိုက်2၏စာမျက်နှာ 29 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery (စာမျက်နှာ 2)
အဆိုပါ StreamGeek ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနယူးယောက်မြို့မှခေါင်းနှစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်
ရှင်ပေါလု Richards, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လွှအရာရှိချုပ်အသုံးပြုပုံ StreamGeeks ငါးခုအချိန်အိုလံပစ်ရွှေကိုဘားဂျွမ်းကစားသမား Nadia Comăneciတစ်ချိန်က said: "။ ခရီးခံစားကြည့်ပါနဲ့နေ့တိုင်းပိုကောင်းရရန်ကြိုးစားလျက်, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုများအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆုံးရှုံးကြဘူး" ဒီစကား 2017 အတွက် StreamGeeks တည်ထောင်သူကတည်းကငါ့အခရီးစဉျတှငျငါနှင့်အတူအ resonated ပါပြီ။ ဤသည်နိုဝင်ဘာလ, အ StreamGeeks တစ် hosting ပါလိမ့်မည် ...
Zixi: လုံလုံခြုံခြုံ IP ကိုကျော်တိုက်ရိုက်, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးဗီဒီယိုပျ
တိ Baldwin, ကုန်ပစ္စည်း၏ဦးခေါင်းကနေ Zixi ယနေ့စားသုံးသူ၎င်းတို့၏လက်ချောင်းထိပ်မှာအကြောင်းအရာချင်တယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကျေနပ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်းအချက်များမှာကယ်မနှုတ်ကြောင်းကိုနည်းလမ်းတွေထဲမှာထုပ်ပိုးမဆိုကိရိယာပေါ်သည့်အချိန်တွင်မဆို content တွေကိုလောင်ချင်တယ်။ မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်သူတို့ကပိုသောအရပ်တို့ကိုမယ့်ပိုပြီး programming ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် IP ကိုဖြန့်ဖြူးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် ...
Paramount ကွန်ယက်ရဲ့ "Yellowstone သို့" ၏ရာသီတဦးတည်းဇာတ်လမ်းတွဲနှုန်းကောင်းစွာကျော် 2018 သန်းကြည့်ရှုပျမ်းမျှ5အတွက်ကြော်ငြာ-supported cable ကိုပေါ်ထုတ်လွှင့်သောအများဆုံးကြည့်ရှုရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအလွန်အမင်းမျှော်လင့်ဒုတိယရာသီသူတို့အားလုံးနှစ်ဖက်ကနေရက်စက်ရန်သူများကိုဆန့်ကျင်ရှင်သန်မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အဖြစ်ကီဗင် Costner မိသားစုကဲ့သို့မိမိအခန်းကဏ္ဍ reprising နှင့်တကွ, Dutton သည်မိသားစုကိုလိုက်နာဆက်လက် ...
Greg Jarvis, Fincons အမေရိကန်မှာအမှုဆောင်ဒုသမ္မတနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာအမေရိကန်ကွင်းထဲတွင် ATSC 3.0 စံ၏ထွန်းကားသူတို့ Hybrid ကို၏အလားအလာစူးစမ်းဖို့မူတည်ပြီးမှ tools များ၏တစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုခင်းကျင်းရှိကိုရှာဖွေအကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ခေတ်သစ်အတွက် သူတို့ကိုအနေနဲ့အစဉ်အဆက်တွင် ပို. ပို. အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာကူညီရန် TV နဲ့ ...
NASCAR က၎င်း၏ပိုမိုနှစ်သက် cloud computing, တိမ်တိုက်စက်သင်ယူနှင့်တိမ်တိုက်ကို Artificial Intelligence ပေးသူအဖြစ် AWS ရွေးချယ်
NASCAR, ပန်ကာအတွေ့အကြုံကိုပိုကောင်းစေပါတယ်အတုထောက်လှမ်းရေးအားထုတ်မှုအရှိန်မြှင့်ခြင်း, မိုဃ်းတိမ် SEATTLE-ဇွန်လ 4, 2019-ယနေ့အမေဇုံက Web Services က, Inc (AWS), တစ်ဦး Amazon.com ကုမ္ပဏီ (NASDAQ: AMZN) ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်စွာတိုးတက်ကောင်းမွန်, ကြေငြာခဲ့သည် စတော့အိတ်ကားအော်တိုပြိုင်ပွဲ (NASCAR) အတွက်အမျိုးသားအစည်းအရုံး cloud-based စက်သင်ယူမှုနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးပမာဏ၎င်း၏စံအဖြစ် AWS ရွေးကောက်တော်မူပြီ။ NASCAR အနံသုံးပါလိမ့်မယ် ...
Avinash Suresh, Yusari Filem မှာဒါရိုက်တာ by သစ်ကိုမီဒီယာနည်းပညာများ၏ကလေးမွေးစားခြင်းနှုန်းကမ္ဘာအနှံ့ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်မလေးရှားအစဉ်အလာဟာရောင်စဉ်၏နှေးကွေးအဆုံးပေါ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံမှ 6mm ကနေပြောင်းရွှေ့အပြည့်အဝကိုင်ကြောင်း 35 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်တစ်ကြိမ်, ပထမမှာနှေးနှေးနေချိန်တွင် ...
NAB 2019 ၏ထိပ်တန်းသုံးဟော့ခေါင်းစဉ်များ
Jon Finegold, Signiant CMO အားဖြင့်ငါတို့သည်လုံးဝ NAB ၏လေဘွေပြီးနောက်အခြေချမီ, ငါယခုနှစ်ပြပွဲအပေါ်အနည်းငယ်ထင်ဟပ်ဝေမျှချင်တယ်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောပြောဆိုမှုများအတွက်မျက်နှာပြင်ဖို့အကြောင်းအရာများကြောင့်ပူဖောင်းကိုနားထောငျဖို့အမြဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ယခုနှစ်တွင်တကယ်ထွက်ရပ်သုံးခု themes များရှိခဲ့သည်။ 1 ။ ကျနော်တို့ကမျိုးစပ်-မိုဃ်းတိမ်သည် / Multi-မိုဃ်းတိမ်ကိုကမ္ဘာကြီးတစ်ခုမှာ၌ရှိကြ၏ ...
2 ၏စာမျက်နှာ 29«12345 » 1020...နောက်ဆုံး»